Vista's Colorful Planet: ကောင်းကင် ပန်းခြံ
လာဖတ်ပြီး ပုံတွေကြည့်သွားပါပြီ။ ညဘက်ဆိုလဲ လှမယ်နော်။ နေ့ခင်းကနဲနဲပူတယ်။ ညနေ၆နာရီလောက်သွားရင် နေ့ရှုခင်းကော ညရှုခင်းပါ မြင်ရမှာ ... တို့သွားတုံးက အဆိုတော်ကောင်မလေးတွေ့ခဲ့ဘူး။ တိုတိုနဲ့ လှေမစီးခဲ့ဘူးလား ...
ကျနော်တို့ သွားတာလည်း ညနေ ၆ နာရီလောက်ပဲလေ ၊ နေပူလို့ စောမသွားတာ။
လှေမစီးဘူး တီဆွိ အဲလှေကြည့်ပီးရယ်ချင်လို့။
မြောင်းထဲမှာ လှေစီးသလိုပဲနော် ဟိဟိ။
ဟုတ်တယ် ရေကူးကန်ကို အဲလိုဓါတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ နာတော့သွားမတည်းတော့ဘူး အဲ့ဟိုတယ်
တော်ကြာရေကူးနေတဲ့ပုံတွေ ဟိုဘလော့ပါ ဒီဘလော့ပါဖြစ်ကုန်မယ်.. :P
i like 2nd pic.It looks so nice... so singapore.
That'd be so nice. I will go there and swim; it would be so nice to swim on top. ho hooo..
ပုံတွေ လှလိုက်တာ ဗစ်စ်ရယ်.... ဓါတ်ပုံရိုက်တော်လိုက်တာ....ထရိုင်ပေါ့ မဝယ်ရသေးလို့ မသွားသေးပါ...
ဗစ်စ် စာမရေးရင် နောက်ကို ဘယ်မှာ လာအော်ရမယ် ဆိုတာ အမ သိပြီ....ဟ ဟ ဟ :P
ဗစ်ရိုက်ပြမှပဲ စင်ကာပူက မြို့ကြီးပြကြီးနဲ့ တူလာတော့တယ် ကျေးဇူး
ဓါတ်ပုံတွေ လှတယ် ညီမ...
အမက အမြင့်ကြီးပေါ်တက်ရမှာကို နဲနဲကြောက်နေလို့ သွားရကောင်းနိုး မသွားရကောင်းနိုးနဲ့ ဖြစ်နေတာ...
ညီမနဲ့ တီတီဆွိ တို့ဆီမှာ ကြည့်ရသလောက်တော့ သိပ်ကြောက်စရာမကောင်းလှဘူးပဲ... နေသာတဲ့ တညနေမှ သွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်...
ကျေးဇူး ညီမ...း))
ဓါတ်ပုံတွေ လှတယ် ညီမလေးရေ ...
လေသလပ်ခံတယ် ဆိုတာ ကြိုက်သွားပြီ ...